FTC iyo Ha Raadin
Raad-raac: Maxay Suuqyayaashu U Baahan Yihiin Inay Ogaadaan
Arbacada, Janaayo 26, 2011 Isniintii, September 28, 2020 Douglas Karr
Waxaa horey u jiray waxoogaa war ah oo ku saabsan codsigii FTC ee shirkadaha internetka si ay u suurtageliyaan astaamo awood u siinaya macaamiisha in aan lala socon. Haddii aadan akhrinin 122-bog Privacy wargelinta, waxaad u malayn lahayd in FTC ay dejineyso nooc ka mid ah xariiqda ciidda aaladda ay codsanayaan in la yiraahdo Ha la socon.
waa maxay Ha la socon?
Waxaa jira dhowr hab oo shirkadaha ay ula socdaan habdhaqanka macaamiisha khadka tooska ah. Kuwa ugu caansan, dabcan, waa kukiyada biraawsarka oo keydiya xogta iyo macluumaadka markaad la falgalayso degel. Kukiyada qaarkood waa saddexaad, oo macnaheedu yahay in macaamilka lagala socon karo goobo badan. Sidoo kale, waxaa jira qaab lagu qaado xogta iyadoo loo marayo Flash files files kuwani ma dhici karaan mana caadi ahaan in la tirtiro markaad nadiifiso cookies-ka biraawsarkaaga.
Ha la socon waa ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo FTC ay jeclaan laheyd in la hirgaliyo taas oo awood u siinaysa macaamilka in ay joojiso in lala socdo. Hal fikrad ayaa ah in si fudud loo muujiyo marka xayeysiinta la dhigayo xog la raacayo, iyadoo la siinayo macmiilka inuu doorto ka-qabashada xogta iyo xayeysiinta. Fikrad kale oo ka socota FTC waa in, halkii, la bixiyo Just In Time xogta looga faa'iideysan karo rukhsadda macaamilka si loo dhigo xayeysiis ku habboon.
In kasta oo FTC ay soo jeediyeen talooyinkaan… iyo waxoogaa maldahan ah in haddii warshaduhu aysan wax la imaanin, laga yaabo inay might sidoo kale ay garwaaqsadaan cawaaqibka teknoolojiyada noocaas ah. Runtu waxay tahay in suuqleyda mas'uulka ka ah iyo shirkadaha internetka ay adeegsanayaan xogta habdhaqanka si ay u soo saaraan khibrad adeegsade wanaagsan oo ka sii wanaagsan. FTC waxay aqoonsan tahay tan iyagoo sheegaya:
Farsamooyinka noocan oo kale ah waa inaysan hoos u dhigin faa'iidooyinka ay xayaysiinta anshaxa qadka tooska ah ku bixin karaan, iyadoo lagu maalgelinayo waxyaabaha iyo adeegyada qadka tooska ah lagu bixinayo iyo bixinta xayeysiis shaqsiyadeed oo macaamiil badani qiimeeyaan
Warbixinta Asturnaanta waxay ku socotaa inay sheegto in diiwaangelin kasta oo dhexe sida tan Ha Call Liistadu macquul maaha oo xal looma baari doono. Warbixinta Asturnaanta FTC, lafteeda, waxay kicisaa dhowr su'aalood oo waaweyn:
Sidee waa in farsamadaas oo kale la siiyaa macaamiisha oo la shaaciyey?
Sidee farsamooyinka noocan oo kale ah loogu qaabeyn karaa inay noqdaan cad oo la isticmaali karo sida ugu macquulsan macaamiisha?
Waa maxay kharashaadka iyo waxtarka bixinta habka? Tusaale ahaan, imisa macaamiil ah
waxay u badan tahay inay doortaan inay ka fogaadaan helitaanka xayeysiinta la beegsanayo?
Immisa macaamiil ah, oo ku saleysan gabi ahaanba iyo boqolkiiba, ayaa ka faa'iideystay qalabka ka bixitaanka hadda la siiyaa?
Maxay u badan tahay saamaynta haddii tiro badan oo macaamiil ahi doortaan inay doortaan?
Sidee ayey saameyn ugu yeelan laheyd daabacayaasha iyo xayeysiistayaasha khadka tooska ah, iyo sidee ayey u saameyn laheyd saameyn ku yeelato macaamiisha?
Waa in fikradda a habka xulashada guud in lagaa dheereeyo wixii ka dambeeya xayeysiinta anshaxa ee internetka oo lagu daro, tusaale ahaan, xayeysiinta akhlaaqda ee barnaamijyada moobiilka?
Haddii qaybaha gaarka loo leeyahay aysan ku hirgelin nidaam xulasho midaysan oo wax ku ool ah ikhtiyaari ahaan, waa in FTC ku talin sharci u baahan farsamadan oo kale?
Marka… ma jirto sabab aad u argagaxto xilligan. Ha la socon maahan wax la hubo. Malahayga waa inaanay waligeed qaadan doonin dadka badani. Taabadalkeed, saadaashaydu waxay tahay in warbixintu u horseedi doonto asturnaan hufan iyo raad raadin goobaha (attn: Facebook). Taasi maahan wax xun, waxaan u maleynayaa in inta badan suuqleyda sharciga ahi ay qadarinayaan hadalada gaarka ah ee adag iyo kuwa cad.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko shaqsiyaadka daalacashada ah ee adeegsanaya qaar ka mid ah jaridda iyo adeegga fariimaha ee dadka isticmaala siinaya jawaab celin cad marka xogtooda la uruurinayo, cidda keydineysa, iyo sida looga faa'iideysanayo si ay u muujiso xayeysiinta la xiriira ama waxyaabaha firfircoon. Haddii warshaduhu bixin karaan heerar, waxay horumar weyn u noqon doontaa macaamiisha iyo suuqleydaba. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo Ha la socon websaydhka iskaashiga
Tags: ha wicinha raadsanftckaliya wakhtiga
Aprimo: Suuq-geynta Tech Video